Koox ku labisan dharka ciidanka militeriga oo saakay dhac ka geystay magaalada Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Koox ku labisan dharka ciidanka militeriga oo saakay dhac ka geystay magaalada Muqdisho
Koox ku labisan dharka ciidanka militeriga dowladda federaalka Soomaaliya ayaa saakay dhac ka geystay dukaan ku yaala degmada Dharkeenley ee magaalada Muqdisho, sida ay inoo xaqiijyeen qaar ka mid ah dadka deegaanka ee halkaas.
Wararka ayaa sheegaya in kooxdaan ay si xoog ah ku galeen dukaan ku yaala degmada Dharkeenley, iyagoona kadib qoryo ku qabtay dadkii dukaanka lahaa ee halkaas joogay, kadibne ka qaatay alaabo iyo lacag oo taalay dukaanka.
Ilaa iyo haatan lama oga kooxdaasi ku labisnaa dharka ciidanka militeriga Soomaaliya inay ka tirsan yihiin dowladda federaalka Soomaaliya iyo inkale, iyadoona kooxdaas ay goobta isaga baxsadeen kadib markii ay dhaca geysteen.
Dhinaca kale, ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ayaa goobta soo gaaray, iyagoona kadib halkaasi ka bilaabay baaritaano xoogan, mana jirto cid ilaa iyo haatan lagu soo qab-qabtay howlgalkaas.
Si kastaba ha ahaatee, waa markii ugu horeeysay muddo dhowr sanadood ah oo fal noocaan oo kale ah uu ka dhaco degmada Dharkeenley ee magaalada Muqdisho, iyadoona hadal heynta magaalada ay maanta tahay dhaca loo geystay dukaanka halkaasi ku yaala.